Забур 50 CARS - Nnwom 50 ASCB
1Tweaduampɔn, Onyankopɔn, Awurade no kasa,
ɛfiri apueeɛ kɔsi atɔeɛ.
2Onyankopɔn hran firi Sion
kuro a ne fɛ wie pɛ yɛ.
3Yɛn Onyankopɔn reba nanso ɔrenyɛ komm;
ogya a ɛhye nneɛma di nʼanim,
sɛ ɔrebu ne nkurɔfoɔ atɛn;
5Ɔka sɛ, “Boaboa nnipa a wɔate wɔn ho no ano ma me,
wɔn a wɔnam afɔrebɔdeɛ so ne me yɛɛ apam no.”
6Ɔsoro pae mu ka ne tenenee,
na Onyankopɔn ankasa ne ɔtemmufoɔ.
7“Montie, me nkurɔfoɔ na mɛkasa,
mɛdi adanseɛ atia wo, Ao Israel;
Mene Onyankopɔn, wo Onyankopɔn no.
8Merenka mo anim wɔ mo afɔrebɔdeɛ
anaa mo hyeɛ afɔdeɛ a ɛwɔ mʼanim daa no ho.
9Anantwinini a wɔfiri mo mfuo so
anaa mpapo a wɔfiri mo buo mu ho nhia me,
10ɛfiri sɛ kwaeɛ mu aboa biara yɛ me dea,
anantwie a wɔwɔ nkokoɔ mpempem so nso saa ara.
11Menim anomaa biara a ɔwɔ mmepɔ no so,
na wiram abɔdeɛ nyinaa yɛ me dea.
12Sɛ ɛkɔm dee me a, anka merenka nkyerɛ mo;
ɛfiri sɛ, ewiase ne deɛ ɛwɔ mu nyinaa yɛ me dea.
na menom mpapo mogya anaa?
14Momfa aseda afɔdeɛ mma Onyankopɔn,
na monni bɔhyɛ a mohyɛɛ Ɔsorosoroni no so,
15na momfrɛ me da hiada;
na mɛgye mo na moahyɛ me animuonyam.”
16Nanso, amumuyɛfoɔ deɛ, Onyankopɔn bisa wɔn sɛ,
“Adɛn enti na moka me mmara ho asɛm
17Mokyiri me nkyerɛkyerɛ
na moto me nsɛm gu mo akyi.
18Sɛ mohunu ɔkorɔmfoɔ a, mode mo ho bɔ no;
na mo ne awaresɛefoɔ nso bɔ.
19Mode mo ano yɛ bɔne
20Mokasa tia mo nuabarima ɛberɛ biara
na mosopa mo ankasa maame ba.
21Moayɛ yeinom nyinaa; nanso manka hwee,
enti mosusu sɛ mete sɛ mo.
Nanso mɛka mo anim
na mede mo soboɔ asi mo anim.
22“Monnwene yei ho, mo a mo werɛ firi Onyankopɔn,
anyɛ saa a, mɛtete mo mu nketenkete a obiara mmɛgye mo;
23Deɛ ɔbɔ aseda afɔdeɛ no hyɛ me animuonyam,
na ɔsiesie ɛkwan
sɛdeɛ mɛda Onyankopɔn nkwagyeɛ adi akyerɛ no.”
ASCB : Nnwom 50